Maxaa diirada lagu saarey kulanka Axmed Madoobe iyo Yamomoto?
By Madaxtooyadda Jubaland + GO
NAIROBI, Kenya - Madaxweynaha Dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta Khamiis 23-Jannaayo-2020 magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya kula kulmey Safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya mudane Donald Yukio Yamomoto.
Ugu danbeyn safiirka Maraykanka ee Soomaaliya mudane Yamomoto ayaa madaxweynaha Jubbaland uga mahadceliyey sida hagar la'aanta ee uga qeyb qaatey nidaamka deyn cafinta Soomaaliya.
Madaxtooyadda Jubaland + GO
Xukuumadda Soomaaliya oo ayiday baaq kasoo yeeray Axmed Madoobe
Soomaliya 12.03.2020. 08:25
Madaxweynaha Jubaland ayaa dhowaan soo jeediyey in miiska wadahadalka lagu dhameeyo.
Axmed Madoobe oo ka walaacsan xiriirka liita ee DF iyo maamulada
Soomaliya 09.01.2020. 16:10
Tirada geerida qaraxii Kismaayo iyo jinsidayaha ajaaniibta lagu dilay
Soomaliya 13.07.2019. 10:41
Madaxweynaha Jubaland booqdey ciidamo ku wajahan Jamaame
War Saxaafaded 21.02.2020. 17:15
Dowlada Mareykanka oo cadaadis saartey Madaxweyne Farmaajo
Soomaliya 06.02.2020. 00:31
Axmed Madoobe, Shariif Xasan iyo Sheekh Shariif oo kulmay
Soomaliya 14.12.2019. 07:49
Axmed Madoobe oo amar kasoo saarey colaada duleedka Kismaayo
Soomaliya 04.04.2020. 12:36
Axmed Madoobe oo xog ku kordhiyey sababta DF u xirtay wasiir Janan
Soomaliya 20.01.2020. 12:18